UPcoin စျေး - အွန်လိုင်း XUP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို UPcoin (XUP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ UPcoin (XUP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ UPcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ UPcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
UPcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
UPcoinXUP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0102UPcoinXUP သို့ ယူရိုEUR€0.00865UPcoinXUP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0078UPcoinXUP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00931UPcoinXUP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0911UPcoinXUP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0645UPcoinXUP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.226UPcoinXUP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0381UPcoinXUP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0136UPcoinXUP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0143UPcoinXUP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.225UPcoinXUP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0794UPcoinXUP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.055UPcoinXUP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.767UPcoinXUP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.73UPcoinXUP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.014UPcoinXUP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0156UPcoinXUP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.319UPcoinXUP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0712UPcoinXUP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.09UPcoinXUP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩12.15UPcoinXUP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.96UPcoinXUP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.748UPcoinXUP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.28
UPcoinXUP သို့ BitcoinBTC0.0000009 UPcoinXUP သို့ EthereumETH0.00003 UPcoinXUP သို့ LitecoinLTC0.000188 UPcoinXUP သို့ DigitalCashDASH0.000113 UPcoinXUP သို့ MoneroXMR0.000115 UPcoinXUP သို့ NxtNXT0.799 UPcoinXUP သို့ Ethereum ClassicETC0.00151 UPcoinXUP သို့ DogecoinDOGE2.96 UPcoinXUP သို့ ZCashZEC0.000124 UPcoinXUP သို့ BitsharesBTS0.316 UPcoinXUP သို့ DigiByteDGB0.328 UPcoinXUP သို့ RippleXRP0.0364 UPcoinXUP သို့ BitcoinDarkBTCD0.000353 UPcoinXUP သို့ PeerCoinPPC0.034 UPcoinXUP သို့ CraigsCoinCRAIG4.67 UPcoinXUP သို့ BitstakeXBS0.437 UPcoinXUP သို့ PayCoinXPY0.179 UPcoinXUP သို့ ProsperCoinPRC1.29 UPcoinXUP သို့ YbCoinYBC0.000006 UPcoinXUP သို့ DarkKushDANK3.29 UPcoinXUP သို့ GiveCoinGIVE22.19 UPcoinXUP သို့ KoboCoinKOBO2.33 UPcoinXUP သို့ DarkTokenDT0.00943 UPcoinXUP သို့ CETUS CoinCETI29.59
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 14:30:03 +0000.